फोटोन कपाल हटाउने उपकरण, फ्रिजिंग पोइन्ट कपाल हटाउने उपकरण र नीलमणि फ्रिजिंग पोइन्ट कपाल हटाउने यन्त्र बीचको भिन्नता-टेक्निकल जानकारी-शेन्जेन नोबल स्मार्ट निर्माण कम्पनी लिमिटेड
समय: 2021-06-09 हिट्स: 13
तातो मौसमले हामीलाई स्कर्ट र छोटो आस्तीन लगाउँदछ, तर बाक्लो कपाल भएका केटीहरू स्वतन्त्र रूपमा त्यो लगाउन सक्दैनन्। केटीहरू सडकमा चम्किलो स्थान हुन चाहन्छन, तर उनीहरू डन गर्छन्'धेरै सबै कपालको कारण सबैको गफ हुन चाहँदैन।
बजारको माग बढ्दै जाँदा बजारमा विभिन्न प्रकारका कपाल हटाउने उपकरणहरू छन्। उत्पाद सिद्धान्तहरू र प्यारामिटरहरू बुझ्न नसक्ने कारणले गर्दा सबैलाई कपाल हटाउने यन्त्रहरू छनौट गर्न कठिनाई हुन्छ र विभिन्न कपाल हटाउने यन्त्रहरूको सामना गर्नुपर्दा अलमल्लमा पर्छ।
आज हामी फोटोन कपाल हटाउने उपकरण, फ्रिजिंग पोइन्ट कपाल हटाउने उपकरण र नीलमणि फ्रिजिंग पोइन्ट कपाल हटाउने उपकरण बीचको भिन्नतालाई हेर्नेछौं।
मलाई पहिले परिचित फोटोन कपाल हटाउने उपकरणको बारेमा कुरा गर्न दिनुहोस्: फोटोन कपाल हटाउन कपाल हटाउन को प्रभाव लाई प्राप्त गर्न एक मजबूत स्पन्दित प्रकाश स्रोत को छनौटिक प्रकाश (ब्रॉड स्पेक्ट्रम टेक्नोलोजी) पाइरोलिसिसन सिद्धान्त प्रयोग गर्दछ। फोटोन कपाल हटाउने एक नरम, गैर-हस्तक्षेप अन्तर्गत उपचार लेजर भित्र प्रदान गरीन्छ। यसले कपालको फोलिकुलमा मेलानोसाइट्सले प्रकाशको खास तरंग दैर्धको अवशोषण प्रयोग गर्दछ, कपालको फोलिकलमा तातो उत्पन्न गर्नका लागि, यसले छनौट रूपमा कपालको ध्वंश पार्छ जबकि वरपरका ऊतकोंलाई क्षतिबाट जोगाउँदछ त्यसैले कपाल हटाउँदछ। कपाल हटाउने प्रक्रियाको बखत, लाइट शट हुँदा हामी दुखाइ महसुस गर्न सक्दछौं, तर विभिन्न व्यक्तिको पीडाको लागि फरक सहिष्णुता छ, हामी यो भन्न सक्दैनौं कि यो कति पीडादायी छ।
फ्रिजिंग पोइन्टको मतलब भनेको कपाल हटाउने प्रक्रियाको बखत, उपकरणको अनुसन्धान (लाइट आउटलेटको क्षेत्र बाहेक) शीतल हुन्छ र शीत बनाउँदछ। जब यसले हाम्रो छालालाई छुन्छ, यसले छिटो छालाको छालालाई चिसो पार्न र हाम्रो छालालाई एनेस्थेटिमा महसुस गर्न सक्छ। यस तरिकाले, जब हामी कपाल हटाउने उपकरण अनुभव गर्दछौं, हामी प्रभावकारी रूपमा धेरै पीडा महसुस नगरी कपाल हटाउन सक्छौं।
फ्रिजिंग पोइन्ट कपाल हटाउने उपकरण: बरफ पोइन्ट कपाल हटाउने र परम्परागत लेजर कपाल हटाउने बीचको संयन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो भिन्नता भनेको परम्परागत लेजर कपाल हटाउन तत्काल उच्च ऊर्जा बर्षाउनु पर्छ कपालको फोलिकुलहरू, जबकि आइस पोइन्ट कपाल हटाउन कोमलताले कपालको कपालहरू निष्क्रिय गर्दछ, त्यसैले यो अत्यधिक उत्तेजना बिना लामो अवधिमा कपाल हटाउन प्राप्त गर्न सक्दछ। छाला दुख्ने वा जोखिम हटाउनुहोस्। फ्रिजिंग पोइन्टको सिद्धान्त बुझ्न गाह्रो छैन।
नीलमणि फ्रिजिंग पोइन्ट कपाल हटाउने उपकरण: नीलमणि सामग्री उपचार को माध्यम बाट, छालाको सम्पर्कमा रहेको सम्पूर्ण प्रकाश आउटलेट स्थिर स्थितिमा हुन्छ। सीधा प्रकाश तरंगको स्रोतबाट, स्पन्दित प्रकाश कृत्रिम नीलमणिबाट बग्छ, व्यापक बरफ संरक्षण प्राप्त गर्दछ, ताकि पीडा कम गर्न।
तीन किसिमका कपाल हटाउने उपकरणहरूको बारेमा सिकिसकेपछि, कुन चाहिं तपाईले छनौट गर्न अधिक इच्छुक हुनुहुन्छ? नोबलले सोच्दछन् कि तपाईले कुन प्रकारको कपाल हटाउने उपकरण छनौट गर्नुभयो, यो लामो समय सम्म तपाइँले प्रभावकारी रूपमा कपाल हटाउन मद्दत गर्न सक्दछ, यो राम्रो छ!
अघिल्लो: अधिक र अधिक व्यक्तिहरूले घर कपाल हटाउने छनौट गर्नुको कारण के हो?
अर्को: उच्च मूल्य प्रदर्शन र राम्रो कपाल हटाउने प्रभावको साथ घर कपाल हटाउने उपकरणको ब्रान्ड सूचीबद्ध